Horudhac: Newcastle United vs Manchester United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ay Man Utd booqanayso St James’ Park) – Gool FM
Horudhac: Newcastle United vs Manchester United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ay Man Utd booqanayso St James’ Park)
Haaruun October 6, 2019
(Newcastle) 06 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa soo dhoweynaysa naadiga Manchester United kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Kooxda macallin Ole ee Manchester United ayaa doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kaddib barbarihii ay la gashay Arsenal, marka ay maqribnimada maanta booqanayso St James’ Park.
Newcastle ayaa soo dhoweyn karta Dwight Gayle oo dib ugu soo laabanaya, kaasoo markii ugu dambeysay oo uu kooxda u ciyaaro ay ahayd 17 bilood ka hor, kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac kubka ah.
Allan Saint-Maximin ayaa tartan ugu jira inuu ku soo bilowdo kulankan, laakiin Isaac Hayden waxaa u bilaabaya ganaax saddex kulan ah.
Dhinaca kale ciyaaryahanka koxoda Manchester United ee Jesse Lingard ayaysan u badnayn inuu ciyaari doono kaddib markii uu dhaawac muruqa ahi uu soo gaaray kulankii ay la ciyaareen AZ Alkmaar.
Paul Pogba oo dhaawac canqowga ah qaba iyo Anthony Martial oo isna bowdada ka dhaawacan ayaa ka maqnaan doona kulankan, sida la warinayo.
>- Newcastle United ayaa kaliya lix guul gaartay 48 kulan oo ay Premier League ku wajahday Manchester United, waxa ay barbaro gashay 14 kulan halka laga adkaaday 28 kulan.
>- Manchester United ayaa guuleystay 13-kii kulan ee ay Premier League booqatay Newcastle, kaliya waxa ay United kaga rikoor wanaagsan tahay kulamada ay martida tahay Aston Villa oo ay ka soo adkaatay 15 kulan iyo Everton oo ay 16 kulan ka soo badisay.
>- Newcastle ayaa laga badiyay kulankaan 28 jeer oo Premier League ah – kooxda kaliya ee ka badisay wax badan waa Arsenal oo ay ka soo gaartay 29 guuldarro.
>- Man Utd ayaan la garaacin 30 ka mid ah 33-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Newcastle tartammada oo dhan.
Horudhac: Southampton vs Chelsea... (Blues oo doonaysa inay sii wadato guulaha booqashadeeda garoonka St. Mary)
Horudhaca kulanka horyaalka La Liga ee ay Kooxda Barcelona caawa Camp Nou ku soo dhoweynayso Sevilla